Maxaad Kala Socotaa Shirkadda Baaxadda Weyn Ee (Brtco General Trading LLC) Iyo Hawlaha Ay Qabato? – Codka Qaranka Tanadland
Maxaad Kala Socotaa Shirkadda Baaxadda Weyn Ee (Brtco General Trading LLC) Iyo Hawlaha Ay Qabato?
Shirkadda (Brtco General Trading LLC) waa shirkadda ugu balaaran oo nooceeda ah oo ay soomaaliyi leedahay.
Shirkadda (Brtco General Trading LLC) waa shirkad aad u balaaran oo ay xarunteedu tahay magaalada Dubai ee wadanka imaraadka carabta. Sidaad ogsoontihiin ilaa iyo bilowgii sanadihii todobaatameeyada magaalada Dubai soomaalidu waxay ku lahaayeen shirkado yar-yar oo alaabta jimlada looga qaato. Haday ahaanlahayd alaabta bagaashka ah sida Dharka, Qalabka electroniga, Briha gawaarida, Qalabka dhismaha, Cuntada iwm. Marka hada ah shirkaddihii waagaas baqaarada lahaa iyo kuwii ka danbeeyeyba soomaalidu magaalada Dubai waxay ku leeyihiin shirkaddo waaweyn oo badeecadaha jimlo u iibiya, baqaaro waaweyn oo faracyo badanna gobalada soomaaliya iyo khaliijkaba ku leh. Shirkaddaha waaweyn ee badeecadaha jimlada u iibiya intooda badan hada waxay leeyihiin sumad badeecadahooda lagu garto. Metalan haweeney badeecadaha cuntada ka mushtarta ayaa baastada ay gado oo dhan waxaa u astaan ah sumad ay iyadu ula baxday. Magacaas iyo naqshada baastadana warshada baastada ay ka gadato ayaa ugu samaysa. Waxaa kaloo jirta sidaas si lamid ah in shirkaddaha ka ganacsada biraha gaadiidka lagu dayactiro iyo saliida biraha, ay hada badankooda alaabta ay iibiyaan ay ugu taalo sumad iyaga u gaar ah oo alaabtooda lagu garto.
Magaalada Dubai wax badan baan tagey, shirkaddaha soomaalida ee alaabta jimlada ah iibintooda ka mushtarana badankoodu waxay leeyihiin hal sumad, sumad daasna waxay ku dhigtaan badeecada ugu muhiimsan badeecadaha ay ka ganacsadaan. Shirkaddo dhawr ah oo labo sumaddood lihina waa ay jiraan. Waxaan kaloo aan filayaa inay naadir tahay shirkad soomaaliyeed oo nooc ay tahayba leh 3 sumadood. Aniga idinla hadlaya intaan aqaan shirkado Soomaaliyi ay leedahay oo badeecooyinkoodu ay 3 sumadood leeyihiin, intaan aqaan waa labo shirkaddood oo keliya.
Labadaas shirkaddoodna waxa weeye (Victoria Juice Company Ltd) oo leh sadex sumaddood oo cabitaan ah. Oo u kala baxa 3 sumaddood oo kala ah,
1) Victoria Spring Water, 2) Victoria Powder Fruit juice, iyo sumadda (Tamu Fruit Juice) oo ka kooban 11 cabitaan oo qudrad laga miiray oo kala duwan. Taas oo ka dhigan 3 sumaddood iyo 13 badeeco oo kala duwan. Shirkadda (Brtco General Trading LLC) oo leh 3 sumaddood oo kala ah (First), (Fresh) iyo (Original). Sadexdaas sumadood oo astaan u ah 11 badeecadood oo kala duwan.
Shirkadda (Brtco General Trading LLC) :-
Shirkadda baaxadda weyn ee (Brtco General Trading LLC) waxaa iska leh iskaashato yar oo ay ku midoobeen 13 nin oo ganacsato reer Tanadland ah. Xubnaha iskaashatada (Brtco General Trading LLC) kuligood waxay leeyihiin ganacsiyo iyaga u gaar ah oo ay ka shaqaystaan. Gudoomiyaha shirkadda (Brtco General Trading LLC) waa nin mudo dheer beecmushteri ahaa. Intii u dhexaysay 1974-tii ilaa iyo 1989 -kii wuxuu ka mid ahaa gancsatada farakutiriska ah ee maraakiibta rarta. Wuxuu kaloo ahaa ganacsadaha bariiska ugu raqiisan dalka keena. Wuxuu kloo ka mid ahaa ganacsatada waaweyn ee waxna dhoofiya waxna soo dejiya.
Sanadkii 1982 ayaa mar aan tago magaalada Dubai iigu horeysey, berigaas gudoomiyaha iskaashatada shirkadda (Brtco General Trading LLC) wuxuu ka mid ahaa ganacsato farokutiris ah oo baqaaro ku leh magaalada Dubai. Ganacsada dalka joogtaana ay ku xiranyihiin oo ay badeecadaha jimlo uga qaataan. Waagaas ganacsata Soomaalida waxaa la orankaraa indhuhu uma aysan furnanyn, hada iyo waagaasna faraq weyn baa u dhexeeya. Waagaas ganacsadaha soomaaliga ah eebaqaarka leh wuxuu ku xisaabtamijirey 99% ganacsatada soomaaliyeed inay wax ka hiibsadaan. Laakiin hada shirkaddaha soomaaliyeed ee alaabta jimlada ah iibiya, macaamiishooda 90% ilaa 80% waxa weeye ajnebi. Sababta oo ah magaalada Dubai waxay suuq u tahay oo u ganacsigoodu ku xiranyahay qaaradaha Afrika iyo Asiya oo dhan.
Shirkadda (Brtco General Trading LLC) Iyo Ganacsigeeda :-
Shirkadda (Brtco General Trading LLC) waa shirkadda ugu balaaran oo nooceeda ah oo ay soomaaliyi leedahay. Tusaale ahaan waxaa jira dhawr badeecaddood oo aan shirkadda Brtco lagula tartamikarin. Tusaale ahaan caanaha qaaradda afrika iyo carabaha loogu jecelyahay ee (Anchor Milk Powder).
I . Badeecadaha Shirkadda (Brtco General Trading LLC) Ee Ku Suntan Sumadda “First”
1) Anchor Milk Powder – Sumad “First”
Qaaradda afrika wadan kuu doono haka yimaadee qofka ganacsadaha ah marka uu doonayo in uu caanaha budada ah ee Anchor uu magaalada Dubai ka gato, dabcan baqaarada badeecadaha jimlada ah gada ayuu ku soo wareegayaa. Markaas kedibna wuxuu ogaanayaa in shirkadda ugu qiimaha jabani ay tahay (Brtco General Trading LLC). Sababta oo ay tahay caanaha budada ah dunida sadexaad oo keliya ayaa laga isticmaalaa. shirkadda Brtco na waxay shirkadda (Co−operative Fonterra) oo ah shirkadda leh sumadda (Anchor Milk Powder) ay Dubai wakiil uga ahayd 27 sanaddood. Saas darteed caanaha ugu badan ee (Anchor Milk Powder) ee laga dhoofiyo magaalada Dubai waxaa laga iibsadaa shirkadda (Brtco General Trading LLC). Caanahaasna waxaa lagu yaqaan waxay ku jiraan qasacyo kala du-duwan oo midab buluug ah leh, ayna labada dhinac kaga yaalaan astaamaha labada shirkaddood ee Anchor iyo “First”.
2) Holland Milk – Sumad “Fresh”
Shirkadda (Brtco General Trading LLC) waxay kaloo mudo dheer ay xiriir la lahayd shirkadda soo saarta caanaha aadka loo jecelyahay oo budada ah ee dalka Netherland uu caanka ku yahay. Shirkadda (Brtco) caanaha dalka Holland ee ay jimlada u gaddo sumadda lagu gartaa waxa weeye sumadda “Fresh”, sumadda “Fresh” na waa sumad u gaar ah shirkadda (Brtco) oo astaan u ah caanaha dalka Holland ee ay iibiso.
3) Tomato Paste – Sumad “Fresh”
Waa yaanyada shiidan ee suugada lagu samaysto oo yar-yar iyo waaweyn kala miisaan duwan isugu jirta.
II . Badeecadaha Shirkadda (Brtco General Trading LLC) Ee Ku Suntan Sumadda “First”
4) Basmati Rice – Sumad “First”
Shirkadda (Brtco General Trading LLC) oo talada lagu aas-aasay uu lahaa nin ganacsiga ka bilaabay isagoo aad u da’aad yar, ka ganacsiga dhoofinta hargaha iyo soodejinta bariiska, heer fiicanna ka gaarey oo lagu tiriyo in uu ahaa intii u dhexaysey 1974 ilaa 1989 -kii ganacsadaha dalka keena bariiska ugu jaban.
Ayaa briisku wuxuu yahay badeecadda ugu muhiimsan ee ay shirkadda (Brtco Genrral Trading LLC) ka mushtarto. Sidaad ogsoontihiin bariisku waa cayshka ugu muhiimsan ee umadda soomaaliyeed gasiinka u ah. Bariisku dhaqan ahaan bulshada soomaaliyeed xalad gooniya ayuu u leeyahay. Sanooyinkii ugu danbeeyey saad ogtihiin sicirka bariisku cirka ayuu isku shareeray. Taasina waxay kaliftay in hada wadamo badan oo aan beeranjirin inay beertaan oo ay dhoofiyaan.
waagii barisamaadka ee dowladda la ahaa, ee sanadihii todobaatameeyadii iyo sideetamaadkii ganacsatada soomaaliyeed ee waaweyn bariiska wadamada ay ka keenaan waxaa ka mid ahaa, dalalka India, Indonisia, Thailand iyo Brasil. Gudoomiyaha shirkadda (Brtco Genrral Trading LLC) isagu sanadihii todobaatameeyadii iyo sideetamaadkii baariiska wuxuu ka keenijiray wadanka India oo kaliya. Shirkadda (Brtco General Trading LLC) oo la aas aasay sanadkii 1989 -kii, waxay bilowday inay xadi badan oo bariis ah ay dalka India ka keento oo ay baqaaradeeda ku iibiso. Bariiskuna wuxuu ahaa badeecaddii labaad oo ay shirkadda Brtco sumadda “First” ay u bixiso.
5) Tomato Ketchup – Sumad “First”
Sidaad ogsoontihiin soomaalida waxaa jira arimo aynu wadamada deriska nala ah aynu uga ilbaxsannahay iyo waxyaalo aynu uga danbayno labadaba.
Soomaaliya waxaa aad ugu badan cudur aan caalamka intiisa kale laga aqoon oo “Buufis” la yiraahdo. Cudurka “Buufis” ka la yiraahdo maaha wax dunida
inteeda kale laga yaqaan ee waa cashi soomaalida u gaar ah. Sababta oo ay tahay soomaalida intooda badani ma’ay cunaan cunto ay ku jirto (Vitamin D).
Sidoo kale soomaaliya kama ay jiraan meheradaha cuntooyinka deg-dega ah gada ee baradhada iyo diggaaga shiilan laga iibsado. Marka soomaalidu wax uu cudurka buufisku uu ugu dhacay waxa weeye nafaqada D-da la yiraahdo ayaa jirkooda ka dhamaatay.
Yaanyada cutada bisil lagu iidaanto ee looyaqaan “Ketchup” waxaa aalaa lagu iidaantaa baradhada shiilan ee ay ku badantahay nafaqada (Vitamin D).
Sideedana yaanyada shiidan ee cuntada lagu iidaanto loona yaqaan “Tomato Ketchup” waxaa lagu daraa liin dhanaan marka waxaa ku jira Vitamin C. Laakiin
Soomaalidu mar dhif iyo naadir ah maahane ma’ay isticmaalaan “Tomato Ketchup” ka. Sidaas darteed shirkadda (Brtco General Trading LLC) “Tomato Ketchup” ka loo yaqaan “First” waxaa ka jimleysta ganacsatada afrikada iyo carabaha.
6) Honey – Sumad “First”
Waxaan filahayaa aqristeyaasha maqaalkaan badankiinu inaad gadateen oo aad isticmaasheen malabka caanka ah ee (First Honey). Waxaan kaloo filahayaa inaad dareensantihiin inuu malabka (First Honey) uu dhadhan ahaan ka duwanyahay malabyada kale ee dukaamada iyo suuqyadu ay gadaan. Aduunka shinida malabka ugu badan uguna tayada wanaagsan abuurt waa shinida afrikaanka. Laakiin suuqyada aduunka malab laga keenay wadan afrikaan ah ku’ad ariki-meysid. Malabka (First Honey) waa malab wadan afrikaan ah lagu warshadeeyey, shirkadda (Brtco General Trading LLC) na isaga oo dhalooyin ku jira oo sumadda shirkadda wata ayey dunida meeshii looga baahdo ay u dirtaa.
7) Hot Chilli Sauce – Sumad “First”
Waagii berisamaadka ee aynu dowladda ahayn, waxaa jiri jirtey shirkad aad u nacfi badan oo la yiraahdo “ii-toob”. Shirkadda “ii-toob” waxay lahayd wershed qasacadeysa waxyaabo badan oo khayraadka dalka ka mid ah. Waagii hore shirkadda “ii-toob” waxay qasacadeynjirtey nooyo kala duwan oo yaanyada suugada lagu dalacdo ah. Saas oo ay tahay magaca “ii-toop” waa magac qaali ah oo macno weyn ku fadhiya.
Marka shirkad weyn oo la mid ah (Brtco General Trading LLC) ay in mudaa ka mushtarto badeeco muhiim ah sida bas-baaska cuntada lagu darsado. Oo ay ogaato faa’iidada yar ee ay ka macaashto iyo faa’iidada balaaran ee u helo ninka iska leh warshadda bas-baaska samaysay. Waa arin iska dabiici ah in madaxda shirkadda Brtco ay isweydiiyaan su’aal ah, war hadaynu inta u tagno nin warshad leh oo aynu ku niraahno, bas-baas “ii-toob” oo dhalo noocaas ah iigu toob sow macaashkeenu in door ah kor u kicimaayo?. Su’aashaa jawaabteedu marka ay noqoto “Aahey” waxa xigaa markaas waa hawlgal.
Shirkadda (Brtco General Trading LLC) waxay warshaddi u samaysaa xadi aad u badan oo bas-baas ah. Bas-baas kaasina waa nooca sumadda shirkada Brtco wata ee loo yaqaan (Hot Chilli Sauce “First”).
8) Choco Flakes – Sumad “First”
III . Badeecadaha Shirkadda (Brtco General Trading LLC) Ee Ku Suntan Sumadda “Original”
9) Mango Juice – Sumad “Original”
Waa cabitaan canbe ah oo quraarad nooca midka loo badanyahay ah ku jira, ee aalaa marka la cuntaynayo lagu dhereg-dhacsado ah.
10) Orange Juice – Sumad “Original”
Cabitaan bambeelmo ah oo ku jirta caagad weyn.
11) Guava Juice – Sumad “Original”
Waa cabitaan Saytuun ah oo quraarad nooca midka loo badanyahay ah ku jira, ee aalaa marka la cuntaynayo lagu dhereg dhacsado ah.
Shirkadda (Brtco General Trading LLC) Showroom
Dumarka soomaalida hadda waxyaabaha ugu badan oo ay dumarku isku qurxiyaan, badidooda waxaa sumad u ah magacyo gabdho Soomaaliyeed. Ganacsata dumarka ah oo gedisleyda ahina alaabta ay sumadda la garanayo oo soomaaliyeed ay ku taalo ayey jimlo u iibsadaan. Gabadha hal badeeco oo sumadda ku taala iyo badeecadaba iyadu lehna intaas oo keliya ayaa faa’iido iyo sumcad ugu filan.
Falaakiin mid ogsoonow oo maanka ku hay, habka ganacsiga ee “ii-toob” ku waa hab ganacsi oo aad u faa’iido badan. Sidaas si la mid ahna aad u halis ah oo hadii ay badeecaddu kuu soconweydo uu khasaare xoog lihi kaaga imaankaro. Mideeda kale habkaan ganacsi waxaa aad ugu haboon qof ganacsi wholesaler “Gadisle” ah in mudaa lahaanjirey oo raba inuu ganacsigiisa balaariyo. Waxaase qof keliya uga sii haboon ganacsato iskaashato ah sida (Brtco General Trading LLC).